Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wareegga biyaha ama wareegga biyaha | Saadaasha Shabakadda
Wareegga biyaha ama wareegga biyaha
Xaqiiqdii waad ogtahay waxa wareegga biyuhu yahay, sidoo kale loo yaqaan wareegga biyaha. Waxay ku saabsan tahay dhaqdhaqaaqa joogtada ah iyo meertada ah ee biyuhu ku leeyihiin meeraheenna oo dhan. Bilowga ilaa dhamaadka wareegga, biyuhu waxay mari karaan dhammaan saddexda gobol: dareeraha, adag iyo gaaska. Nidaamka ay dhibic biyo ah ku bilaabato wareegga oo ay ku dhammaato waxay socon kartaa inta u dhexeysa ilbiriqsiyo ama daqiiqado ilaa xitaa malaayiin sano.
Ma rabtaa inaad si qoto dheer u ogaato wareegga biyaha Maqaalkan waxaad ku baran doontaa dhammaan wixii ku saabsan.
1 Sida wareegga biyuhu u shaqeeyo
2 Nidaamyada ku lug leh wareegga biyaha
3 Mudada qaraabada ee wareegga biyaha
4 Ahmiyada meertada biyuhu u leeyihiin nolosha
Sida wareegga biyuhu u shaqeeyo
Biyuhu waxay leeyihiin dheelitirka Dhulka. Had iyo jeer biyo isku mid ah ayaa jira, laakiin meelo kala duwan iyo xaalado kala duwan. Guud ahaan, isu dheelitirnaanta biyuhu waa joogto, in kasta oo moleekuleellada biyuhu si dhakhso leh u wareegi karaan.
Waa Qorraxda oo bilaabeysa inay jihayso oo dhaqaajiso wareegga biyaha kululaynta biyaha badaha iyo badaha. Markay biyuhu uumi baxaan, waxay u baxaan inay noqdaan daruuro. Wakhtigan biyuhu waxay ku jiraan xaalad gaas ah. Marka xaaladaha saxda ah ay jiraan, way dhacdaa roobka. Waxay kuxirantahay heerkulka hawada, roobabku waxay noqon karaan qaab adag (baraf ama roob dhagaxyaale) ama qaab dareere ah (dhibco roob).
Mar alla markii ay biyuhu dhulka ku dhacaan, waxaa lagu keydin karaa qaabka biyaha dhulka hoostiisa ah, waxay sameysmaan biyo, marsooyin, harooyin, harooyinka ama waxay ku biiraan biyaha dusha sare leh sida webiyada, durdurrada, iwm. Hadday taasi dhacdo, biyaha ayaa mar labaad loo horseedaa badda halkaas oo ay mar labaad uumi doonaan iyada oo loo marayo shucaaca qoraxda illaa ay ka samaysmaan daruuro. Tani waa sida wareegga biyaha uu xirmo.
Nidaamyada ku lug leh wareegga biyaha
Waxaa jira habab fara badan oo soo farageliya wareegan biyaha oo iyaga dhexdooda biyuhu ku hayaan dhaqdhaqaaq joogto ah. Tusaale ahaan, waxaa jira habab ay biyuhu uumi baxayaan mana aha inay noqdaan sax ahaanta uumiga biyaha ka yimaada badaha sababo la xiriira shucaaca qoraxda.
Cusbooneysiinta sidoo kale waa natiijada biyaha uumiga Waxay ka timaaddaa labada dhirba inta lagu gudajiro hawsha sawir-qaadista iyo uumi-baxa ciidda.
Marka uumiga biyuhu uu hawada ka kaco, heerkulka qabow ayaa sababa inuu isku uruuro oo daruuro ka sameeyo adduunka. Qaybaha biyaha ee ku jira daruuraha ayaa isku dhaca si loo sameeyo dhibco waaweyn. Dhibcaha biyuhu waxay u baahan yihiin udub-dhexaad uumiga uumiga ah si ay ugu soo biiraan oo ay u samaystaan ​​dhibco biyo-ballaadhan. Xuddunta uumiga waxay noqon kartaa dhibic ciid ah, tusaale ahaan.
Isugeynta joogtada ah iyo isu geynta dhibcaha biyaha, wey weynaanayaan weyna cuslaanayaan ilaa ay ka hoos marayaan culeyskooda. Xaaladahan waxay kuxiranyihiin nooca daruurta taasi waa daqiiqad kasta iyo xaaladaha jawiga. Sidii aan horay u sheegnay, habka dhibic biyo ah (gobolka ay ku jirto) waxay qaadan kartaa xitaa malaayiin sano si loo dhameystiro wareegga waxaa u sabab ah waxyaabaha soo socda.
Mudada qaraabada ee wareegga biyaha
Marka dhibic biyo ah ay ka soo dhacdo daruur qaab adag sida barafka ama barafka, waxay ku urursan kartaa daboolka cirifka iyo barafka mar labaad uumi baxin oo aad uga gudubto adag adoo dareeraya malaayiin sano. Biyahaani waxay kusii jiri karaan qaabkan malaayiin sano hadaan xaaladuhu isbadalin. Tan awgeed, saynisyahannadu waxay macluumaad badan ka soo saari karaan daboolka iyagoo adeegsanaya diirkadaha barafka.
Haddii cimiladu kulushahay, barafku wuu dhalaaliyaa oo dhalaalaa marka gugu yimaado oo heer kulka kor u kaco. Biyaha dhalaalaya ayaa dhex mara dhulka waxayna quudiyaan dooxooyinka iyo webiyada. Roobabka badankood ee daafaha adduunka waxay ku dhacaan badaha. Hadday sidaas ku samayso dhulka, waxay noqon kartaa durdurro dusha sare ah, ama lagu keydin karo dhulka hoostiisa sida biyaha dhulka hoostiisa ah oo quudin kara aquifers. Dhab ahaan, waxaa jira biyo badan oo wali ku haray geedi socodka soo gelitaanka marka loo eego kan mara webiyada iyo harooyinka.
Haddii biyuhu ay ku sii harsan yihiin dhulka hoostiisa, waqtiga ay ku qaadanayso inay mar kale kor u soo kacdo iyadoo laga soosaarayo bini-aadamka ama dib loogu celinayo haro iyo inay mar kale uumi baxdo waxay qaadan kartaa qarniyo.
Markay biyuhu gudaha galaan waxay u baahan tahay in lagu keydiyo dhulka si loo buuxiyo aquifers. Bakhaaradan biyaha ee dhulka hoostiisa ah ayaa aad muhiim ugu ah dadka aadamaha maadaama magaalooyin badan ay iyagu bixiyaan oo keliya. Qaar kale, si kastaba ha noqotee, waxay awood u leeyihiin inay ku dhowaadaan dhulka dushiisa oo ay soo baxaan, iyagoo ku dhammaanaya sida dusha sare iyo biyaha badda.
Ahmiyada meertada biyuhu u leeyihiin nolosha
Wareegga biyaha ayaa muhiimad weyn u leh nolosha dhulka. Waad ku mahadsan tahay, noloshu way sii badin kartaa iyadoo la siinayo sifooyinkeeda. Waxay u oggolaaneysaa xeryahooda dabiiciga in ay falceliyaan si ay u sii wadaan nolosha meeraha. Sidaad horeba u ogayd, jidhka aadamuhu wuxuu ka kooban yahay 60-70% biyo ah, sidaa darteed la'aanteed ma noolaan karno.
Sidoo kale waxay lagama maarmaan u tahay dhirta inay sawirro ka qaadaan oo neefsadaan. Si loo dheelitiro pH-ka biyaha iyo howlaha muhiimka ah ee enzymes-ka, biyuhu waa qodob muhiim ah. Sidoo kale, sida aad ku arki karto isbeddelka dhirta iyo xayawaanka, qaababkii ugu horreeyay nolosha ayaa ka dhashay biyo. Ku dhowaad dhammaan kalluunku wuxuu si gaar ah ugu nool yahay biyo waxaana ku dhex jira tiro aad u tiro badan oo xayawaanno nuujiya ah, ambiibiyiin iyo xamaarato ah. Dhirta qaar sida algae sidoo kale waxay ku baraaraan bay'adaha biyaha ku jira, ha ahaadaan biyo macaan ama cusbo leh.
Sidaad u aragto, biyuhu waa cunsurka ugu muhiimsan dhulkeenna waana ku mahadsan tahay inaan nolol ku heli karno sidaan maanta ku naqaano. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida loo qadariyo kheyraadkan qiimaha badan, laakiin taas, nasiib darro, ay sii kordheyso cariiri.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Wareegga biyaha ama wareegga biyaha